Real Madrid oo u sheegtay Ronaldo inay fasaxayso haddii uu sameeyo halkaan arin!! - Wargane News
Home Sports Real Madrid oo u sheegtay Ronaldo inay fasaxayso haddii uu sameeyo halkaan...
Wali waxaa isi soo taraya wararka ka soo baxaya xaalada Cristiano Ronaldo, kooxdiisa Real Madrid iyo waliba kooxda doonaysa ee Juventus.
Real Madrid ayaa ku wargalisay Cristiano Ronaldo in la fasaxayo haddii uu qabto shir jaraa’id oo isagu uu u madax banaan yahay kaas oo uu ku cadaynayo waxyaabaha ku kalifaya inuu ka tago kooxda sida ay baahisay Cadena COPE.
Florentino Perez ayaa diyaar u ah inuu wadahadal ka galo bixida Ronaldo haddii uu isugu yeero saxaafada isla markaana uu cadeeyo waxa ku kalifaya inuu ka tago kooxda si lamid ah sidii uu sameeyay Xabi Alonso.
Haddii Ronaldo uu qabto shir jaraa’id isla markaana uu cadeeyo sababaha ku riixaya inuu ka tago Real Madrid, markaas qiimaha laacibka ayaa noqonaya kaliya 100 milyan oo euro oo ah mid horay loogu heshiiyay bishii Janaayo ee sanadkaan.
Haddii labada dhinac ay isku afgartaan inay kala tagaan, qorshaha ayaa ah in Cristiano loo macsalaameeyo sida halyeey oo kale maadaama uu wax badan u soo qabtay kooxda.
Somaliland: ‘Berbera Biyo La’aani Kama Jirto, Waase in Maamulka la Saxaa’ Maayarka Berbera oo doonaya inuu Dawladda hoose Berbera la wareegto maamulka biyaha